वालवालिकाहरुका लागि ख्याल गर्नुपर्ने टिप्स, यस्ता छन् - ज्ञानविज्ञान
१. बच्चाले भेटने ठाउँमा चुकुल राख्नुस्
वालवालिकाको मस्तिष्कमा एकदमै सानो कुराले प्रभाव पार्छ । छोरीहरु आठ नौ वर्षपछि नुहाउँदा छातीमा रुमाल बाँध्छन् छोराहरु अण्डरवेर मात्रै लगाएर नुहाउँछन् । कतिपय कुराहरु वालवालिकाले आफैं सिक्छन् ।
सामान्यतया हाम्रो शौचालयमा चुकुल माथि हुन्छ । बच्चा जब ठूलो हुँदै जान्छ । उ आफैं दिसा पिसावका लागि गएको वेला चुकुल लगाउन चाहन्छ तर, सक्दैन ।
उसलाई समस्या हुन सक्छ । किनकि उसले आफ्नो प्राइभेसी मेन्टन गर्न नपाएको सोच्छ । सानो बच्चालाई सुसु भन्दै पटमा राखिदिने चलन हुन्छ । त्यो एकदमै घातक हो ।
२. मोबाइल घातक होइन
३. थोरै नम्बर ल्याउदा गाली नगर्नुस्
ग्रेडिङले पनि समस्या ल्याएको छ । सबै बच्चाले परिक्षामा समान नम्बर ल्याउदैनन् । आफ्नो बच्चाले थोरै नम्बर ल्यायो भने उसको त यति आएछ तिम्रो किन यति थोरै भन्ने चलन छ ।
त्यसले बच्चाहरुमा पढने भन्दा पनि साथीप्रति इगो जन्माउछ । यो नभएको भए त म फष्ट हुन्थें नि भन्ने लाग्छ । त्यसकारण थोरै नम्बर ल्याए भन्दैमा गाली गर्नुहुन्न ।
४. लड्न दिनुस्
दुबै कोठा वा फ्ल्याटमा एउटै उमेरका बच्चा हुन्छन् तर, आमा- आमाको झगडाको कारण पनि ती वालवालिका एक अर्कासंग बोल्न पाउँदैनन् । त्यसले पनि उनीहरुमा समस्या आउछ ।
बच्चालाई छिमेकी अन्टीले केही खान दिइन् भने त्यहाँ जान मन लाग्छ । तर, कतिपय बाबुआमा त्यसरि अरुकोमा गएर खान हुन्न भनेर बावालिकालाई अरुको जान दिँदैनन् ।
५. आफैं कपडा छान्न दिनुस्
लुगा कपडा वा जुत्ता किन्दा बच्चालाई नलाने चलन छ । बच्चाको लागि सामान किन्दिँदा उसैलाई लिएर जानुपर्छ । अर्को कुरा बढ्ने उमेरको भनेर ठूलो लुगा र जुत्ता किन्दिने चलन छ ।
पहिला तपाई आफैं अनुमान गर्नस् । ठूलो लुगा लगाएर तपाई कति हिँड्न सक्नुहुन्छ ।
६. बालबलिकाका समस्या समान हुन्छन्
उच्च, माध्यम र विपन्न वर्ग भनेर समाज विभाजित छ । तर, वालवालिकाको हकमा समान समस्या हुन्छ । फरक खालका वालवालिकासंग फरक समस्या हुन्छ ।
समाजिक प्रभाव र स्वभाव अनुसार फरक फरक हुन्छ । वालसुलभताको कुरा गर्ने हो भने धनी र गीरवमा खासै केही फरक हुँदैन ।
एउटा वालवालिकाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि सबै भन्दा महत्वपूर्ण शारीरिक विकास नै हो । उनको मानसिक विकासमा घर परिवार र उसको बुबा आमाको ब्यबहारमा भर पर्छ ।
आमाले कस्तो बोल्छिन् । बुबाले कसरी बोलाउँछन् त्यसमा भर पर्छ ।
हरेक बच्चाले अढाई वर्ष भएपछि सबै कुरा बुझ्छ । त्यसकारण बच्चा साढे दुई वर्षको भएपछि एउटै बेडमा श्रीमान श्रीमतीवीच सेक्सुअल रिलेशन राख्नु राम्रो मानिँदैन ।
किनकि बच्चाहरुले थाहा पाए पनि त्यस्ता कुरा अभिव्यक्त गर्न सक्दैनन् । तर, पछि समस्या आउन सक्छ ।
Topics #ख्याल गर्नुपर्ने टिप्स #वालवालिका
Don't Miss it यस्ता छन्, भुइँकटहर खाँदाका फाइदा
Up Next भिटामिन ई कुन खानेकुराबाट पाइन्छ ? यस्ता छन्, भिटामिन ईका फाइदा